I-AMP yaseChina i-AMP-CL yoMvelisi kunye noMthengisi | Ixesha elide
CL uthotho uhlobo standard Asphalt Ukuxuba isityalo
CL uthotho uhlobo oluqhelekileyo lwesityalo sokuxuba i-asphalt, luhlobo olusemgangathweni lwesityalo sokuxuba i-asphalt se-Ca, liyinxalenye esemgangathweni yolunye uthotho lwesityalo, iimpawu zalo zobuchwephesha ziimpawu eziqhelekileyo zolunye uthotho lwesityalo. I-Beijing Ca-Long ibambelela kubizo lobungcali, imveliso esemgangathweni, iinkonzo ezichanekileyo, iimodeli ezahlukeneyo zeemfuno zabathengi ezahlukeneyo. ICa-Long iphumelele eyona modeli inkulu yezityalo, ekhokelela kwitekhnoloji, ukusebenza okuzinzileyo, ukhuselo lokusingqongileyo, inandipha udumo oluphezulu kwintengiso. Iimveliso zeCa-Long zinenani lobuchwephesha obunelungelo lobunikazi, itekhnoloji yolawulo lweCa-Long, itekhnoloji yokulinganisa ye-Ca-ende, itekhnoloji yokutsha yomlilo eyahlukeneyo, itekhnoloji yeCa-Long yokurisayikilisha njlnjl. Itekhnoloji yemveliso iphambili kushishino, imveliso ukusebenza kukwinqanaba eliphambili lehlabathi.
■ I-CL-7500 yePlanti yokuXuba iTela, owona mthamo mkhulu kwimarike zehlabathi ngoku. I-CL-3000 ukuya kwi-CL-7500 yeTela yokuXuba iZityalo, ukusebenza ngokukuko kwemveliso ephezulu, ngakumbi ifanelekile ekwakheni ngokukhawuleza wendlela.
■ I-CL-700 ukuya kwi-Cl-2000 yeTela yokuXuba yeziTyalo zizityalo ezincinci, kulula ukusebenza kwaye zigcinwa, kwangaxeshanye, zinomsebenzi ofanayo nomthamo omkhulu weTela lokuXuba le-Asphalt.
Inkqubo yokulawula yamkela i-Ethernet yoshishino kunye neCC-Link Bus-teknoloji, ukuhanjiswa kwedatha kukhawuleza kwaye kuzinzile. Inkqubo yolawulo isebenzisa auto, semi-auto kunye nemowudi yemanyuwali, inkqubo isebenza ngokuzinzileyo nangokuthembekileyo ngokuchaneka okuphezulu
Ii-Aggregates zamkela ubuchule obutsha bokulinganisa, obuphucula uzinzo kunye nokulinganisa ukuchaneka kakhulu.
■ Isitshisi esidityanisiweyo esinamafutha amaninzi, umatshini omnye wokuhlangabezana nokusetyenziswa kweoyile yedizili, ioyile enzima, igesi yendalo, uthuli lwamalahle, ukusebenza ngokukuko kunye nokonga umbane
■ Uyilo lweemodyuli. Ikheshi eshushu kunye nokuzalisa ilifti zidibanise nenqaba ephambili, eyenza ukuhlangana kunye nokuqhaqha izixhobo kube lula ngakumbi.
■ Nxiba ingxubevange leemigca ingxubevange eyenziwe Sweden BZH zingasetyenziswa lokuxhuba, nto leyo iphucula ubomi Umxhubi kakhulu.
■ Icala elisezantsi lokugcina umxube oshushu liphucula kakhulu ukhuseleko nokuthembeka kokusebenza; Gcina amandla, ilahleko encinci yobushushu; Ukufakwa ngokukhawuleza kunye nendawo encinci yomgangatho.
Ngama-56T / H.
Ngama-80 T / H.
Ukuqwayita roller (mm)
2002200 × 8000
×3000 × 12000
Ngama-60 T / H.
Indawo yokuCoca iBhagi
580 m3/ imiz
780 m3/ imiz
990 m3/ imiz
1380 m3/ imiz
1780 m3/ imiz
2170 m3/ imiz
3150 m3/ imiz
I-Elevator eshushu kaMax amandla
Iifayile zokuhluza Amandla oMbane
I-12T / H.
Ngama-48 T / H.
Ngama-56 T / H.
I-84T / H.
Iidesika ezi-6 ngamacandelo ali-11
8 Iidesika ezili-15
Bin 料仓 Umgqomo oshushu
Uluhlu oluDibeneyo lokulinganisa
Uluhlu lweBitumen Scale
Uluhlu lweNqanaba lokugcwalisa
Umdibaniso ± 0.5% Ibhitumene≤ ± 0.25% Isigcini-mlilo
Umthamo wamatanki eBitumen
Ukuqhuba i-Boiler ye-oyile ye-Thermal （Kcal / h）
I-300 000 Kcal / h
I-600 000 Kcal / h
Ngama-800 000 Kcal / h
I-1000 000 Kcal / h
I-1600 000 Kcal / h
Okulandelayo: Uhlobo lweContainer epheleleyo ye-AMP-CLJ